ကိုယ်...ချစ်၍ ကိုယ် ဖန်တီးသော ''စာပေအနုပညာ''
Thura' s Creation
“ဂျူးရဲ့ ရသခြုံလွှာကို ခံစား၊ဝေဖန်ခြင်း”
ဂျူး၏ #သက်တံတို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ ချစ်သူရဲ့ခြုံလွှာကို ဝေဖန်ညွှန်းဆိုချက် (ရွှေအမြုတေ၊ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီးသည့် ဆောင်းပါး) —————- “ဂျူးရဲ့ ရသခြုံလွှာကို ခံစား၊ဝေဖန်ခြင်း” ၁။ စာအုပ်အမည် = သက်တံတို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ ချစ်သူရဲ့ခြုံလွှာ စာရေးသူအမည်=ဂျူး ထုတ်ဝေခြင်း= ဂျူးစာပေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ တန်ဖိုး= ၄၅၀၀ ကျပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း ၃၅၄ မျက်နှာ။ ၂၀၁၈၊ ဇွန်လထုတ် (…လို့ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းမှာ ရေးထားပေမဲ့ ဇူလိုင်လထဲမှာမှ ဆိုင်ပေါ်ရောက်တဲ့) ဆရာမဂျူးရဲ့ “သက်တံတို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ ချစ်သူရဲ့ခြုံလွှာ” အမည်ရှိ စာအုပ်သစ်အကြောင်း နည်းနည်း ပြောပါ့မယ်။ စကားမကျန်အောင် ကြိုရှင်းပြရရင် စာပေလောကမှာ Book Review (စာညွှန်း) နဲ့ Literary Criticism (စာပေဝေဖန်ရေး) ဆိုတာ မတူကွဲပြားတဲ့ ဖန်တီးမှုများ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် မောင်သင့် သိသလို၊ အားလုံးလည်း သိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စာညွှန်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ညွှန်းဆိုပြတာလောက်ပဲဖြစ်ပြီး စာပေဝေဖန်ရေးကတော့ ပညာရပ်ဆန်သော၊ လေးနက်ကျယ်ပြန့်သောသဘော ရှိပါတယ်။ စာပေဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့ နယ်ပယ်ထဲကနေ စာအုပ်၊ စာပေတွေကို ဝေဖန်မယ် ဆိုရင် ဝေဖန်သူဆီမှာ မလွဲမသွေ ရ
အစအဆုံး ဖတ်ရန် ->
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို ခံစား ဝေဖန်ခြင်း
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို ခံစား ဝေဖန်ခြင်း ''သင့်အေးရိပ်'' --------------------------------------- အခုတလော လူပြောများခဲ့တဲ့ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကျန်အောင် နည်းနည်း ပြောခဲ့ချင်သေးတယ်။ ဒီကား ရုံတင်ချိန်က အန်တီဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ဝေဖန်စကား “မြို့သားရိုက်တော့ မြို့လက်ရာပေါ့” ဆိုတာကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကသား အချင်းချင်း အငြင်းတွေပွားကြ၊ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်ကြနဲ့ အတော်လေး ပွက်လောရိုက်နေကတည်းက ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်မိတဲ့ကားပါ။ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတဲ့ စကားကို ပြောတဲ့သူတွေ စာရင်းမှာ ပါနေတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ရုံမှာ အချိန်ပေးပြီး သွားကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်မှု ပေးနိုင်တာက စတယ် ဆိုပါစို့။ ကျနော် သွား မကြည့်မချင်း “မကြည့်သေးဘူးလား… သွားကြည့်အုန်း”ဆိုပြီး တိုက်တွန်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကြောင့်လည်း ရုံ စတင်ပြီး တစ်ပါတ်ကျော် ကြာမှ သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့။ ကြည့်ပြီးလျှင် ပြီးခြင်းပဲ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းက ကျနော့် မှတ်ချက်ကို ကြားချင်တာကြောင့် ထင်ရဲ့ “ဘယ်လိုလဲ… ကောင်းတယ် မဟုတ်လား”တဲ့။ ကျနော် ဘယ်လို ပြန်ဖြေရမလဲ
နေ့ တွေကတော့ တစ်နေ့ ပြီး တစ်နေ့ကုန်နေခဲ့ ပြီ….. ဖြစ်တည်မှုအသစ်နဲ့ဆုံ ဖို့ဘယ်နှစ်မှတ်တိုင်လောက်….. လိုသေးသလဲ.? ဘယ်သူကမှ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့မရပ်တန့် ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံတရားရဲ့ရယ်သံတွေကြားမှာ… အရာရာက စနစ်တကျ မှားနေခဲ့ ပြီးသား။ …. …. … … … … … ဒါကြောင့်လည်း…………….. ငါ့ကို ငါ ပြန်ရှာ မတွေ့ သေးတာ။ --------------- သင့်အေးရိပ် Photo - from internet
ဝမ်တိန်အသွားလမ်းကို ခံစား၊ ဝေဖန်ခြင်း (စာပေဆောင်းပါး)
ဝမ်တိန်အသွားလမ်းကို ခံစား၊ ဝေဖန်ခြင်း (ရွှေအမြုတေ/ မေလ- ၂၀၁၇) ---------------------------------- ၁။ ၂၀၁၇၊ မတ်လထုတ်၊ ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါလာတဲ့ ဆရာဥာဏ်သစ်ရဲ့ "ဝမ်တိန်အသွားလမ်းမှသည်"ဆိုတဲ့ စာပေဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘာသာပြန်သူ"ဝင့်ပြုံးမြင့်"က "ဝမ်တိန်အသွားလမ်း" အမည်နဲ့ မြန်မာပြန်လိုက်တဲ့ မူရင်းစာရေးဆရာမ WENDY LAW-YONE ရဲ့ THE ROAD TO WANTING ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ခံစား ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်တွေကို အခုမှ စဖတ်ဖူးတာပါဆိုတဲ့ ဆရာဥာဏ်သစ်က သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ "ဘာသာပြန်သူဟာ အမှားပေါင်း ၂၀၀ လောက် မှားထားတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတော့မှ ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ ဘာသာပြန် စာအုပ်သစ် ထွက်ရှိကြောင်း ကြားရုံကြား၊ မြင်ရုံမြင်ပြီး မဖတ်ရသေးတာကို သတိရသွားတာက တစ်ကြောင်း၊ အမှား ၂၀၀ လောက် ပါနေတယ်ဆိုလို့ "ဟ... ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလိမ့်" ဆိုပြီး စာအုပ်ဆိုင်မှာ အပြေးအလွှား သွားဝယ်ပြီး၊ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မိတာက တစ်ကြောင်း၊ အဲ့ဒီလို အကြောင်းတွေ တိ
ရနံ့တစ်ဝက် အသံတစ်ဝက်နဲ့ လွင့်ပျံ့လာတဲ့ အရောင်
ပြိုင်ပွဲထဲ ဝင်မပါတော့တဲ့လူရဲ့ ခြေရာ
“ခြေရာ” ————————————————————- “ဒါ ကျားခြေရာဆိုတာ သေချာရဲ့လား” “သေချာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ” “သြော်… ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောင်ခြေရာကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ကြည့်လိုက်တာလားလို့ပါ၊ အင်း….. ဖြစ်တတ်လို့ပါ။” တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သည့် မြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း ၁၉၉၇ / နိုဝင်ဘာလထုတ် စာအုပ်ထဲမှ “ခြေရာ”အမည်ရှိ ဝတ္ထုတို။ ————————————————————- လွန်ခဲ့သော လေးငါးခြောက်ရက်တုန်းက ကျွန်တော် ကြောင်ခြေရာတစ်ခုကို အကျယ်ချဲ့ကြည့်မိပြီး ကျားခြေရာကြီး မြင်မိသလိုမျိုး ခံစားချက်တွေ အိုဗာ ဖြစ်မိခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာ တစ်ခုနှင့် ကြုံရသည့်အခါတိုင်း သွေးဆူလွယ် ခံစားလွယ်တတ်သော ကျွန်တော့် ထုံးစံအတိုင်း တအုံ့နွေးနွေးဖြင့် မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ခံစားမှုတွေ ပြင်းထန်ပြီး စိတ်ထင်ရာတွေ ပြောမိ၊ရေးမိ၊ လုပ်မိသည် ဆိုပါစို့။ အမှန်တော့ ကြုံရသည့် ပြဿနာသည် သွေးအေးသွားသော ယခုအချိန်မှာ ပြန်ကြည့်သောအခါ… ကျားခြေရာလောက် မကြီးမားသည့် ပြဿနာမျှသာ … ။ အဲသည်တုန်းကတော့ သွေးမအေးတတ်သောကြောင့် ကြောင်ခြေရာလောက်ကို ကျားခြေရာကြီးသဖွယ် ထင်မှတ်ကာ ပိုပိုသာသာ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ချင်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးအထွေလည်း မဟုတ်လှ။ အဲသည် ပြဿနာက
”…..မြေပုံထဲမှာ မပါချင်တဲ့လမ်း” တစ်ဖက်က တွန်းပြီး တစ်ဖက်က ဆွဲနေတုန်းပဲ။ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်ဝါကလည်း တွန်းတိုက် ဆန့်ကျင်. . . ဘေးဘီနဲ့ဝဲယာကလည်း ကော့လန် ထွန့်လူး. . . ကြွေမှာကြောက်ရတယ်… နဂိုကတည်းကမှ အညှာမခိုင်သေးတဲ့ သစ်သီးအကင်းတွေ. . . ဒါပေမဲ့ ”အခါးဆိုတာ လူနဲ့ တည့်သကွ”ဆိုပြီး… နည်းနည်းတော့ အချိုပေါ့ထားတယ်။ ပြီးပါလေရော. . . ဖြစ်ပုံက အဲ့ဒီမှာကတည်းက စ. . . လွဲသွားခဲ့တာ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် နီးစပ်လှပြီ ထင်နေတဲ့ နားရွက်တစ်စုံလိုပဲ. . . တကယ်တမ်းကျတော့ တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်က မမြင်ရရှာဘူး။ ဒီခရီး. . .နီးသလားတဲ့. . . ဟေ့အေး. . . ဝေးလွန်းတယ်။ သွားဖန်များတော့လည်း ခြေထောက် ညောင်းရုံပဲ။ လမ်းကိုက…………..”——” —————————————— သင့်အေးရိပ် 06-Jan-2017